Amaphupho nezincazelo Archives – iAfrika
Uma uphupha amaklabishi, lokho kusho ukuthi kukhona umuntu oseduze nawe ozithwele. iAfrika
Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla noma izenzakalo eziqondanayo. Ukuzizwela ngenhliziyo noma ukuqondiswa ngaphakathi kukusiza ukhethe okuzokuholela kulokhu okudingayo empilweni. Ukuqondisisa kabusha, amandla amasha noma inkululeko entsha etholakalele ngethuba. Okubi ukuthi isiliva lungaba uphawu lokuthi unebhadi noma uzwa sengathi akukho okukusebenzelayo. Ukuphupha ngezinto zesiliva kumela ukuzizwela ngenhliziyo noma inhlanhla ehambisana nanoma yini into eyimelayo. … Read more
Read moreIzizathu eziningi zokuthi uphuphe ngaManzi